Animation ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
ကျနော်တို့ ရဲ့ အသဲကျော်ကြီး DC ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး မှော်ဆရာ John Constantine ရဲ့ Solo Animation လေးပါ … သူ့အရင်ကတော့ မိနစ်ပိုင်းစာ TV Series အဖြစ် ထွက်ခဲ့ပြီး Movie အဖြစ် ပြန်ပေါင်းထုတ်လိုက်တာပါ…. အသံသရုပ်ဆောင်ပေးထားတာကလဲ မူလ TV Series မှာ Constantine အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသား Matt Ryan ကိုယ်တိုင်ပါပဲ ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ ဂျွန် ဟာ သူ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ ပေမြဲ နေမြဲ ဆိုးဆဲ ဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ သူ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ချက်စ် တစ်ယောက် ဗြုန်းစားကြီး ရောက်လာခဲ့ပြီး သူ့သမီးလေး ကိုမာ ဝင်နေရာက ပြန်မနိုးလာတဲ့ အတွက် အားကိုးတကြီး လာအကူအညီတောင်းတာပါ ဂျွန် လိုက်သွားပြီး စစ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ အဆိုးရွားဆုံး နတ်ဆိုး တစ်ကောင်က သူ့ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ ချုပ်နှောင်ထားတာပါ ဂျွန် နတ်ဆိုးဆီ လိုက်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ ချက်စ် ရဲ့ သမီးက ငါးစာ သက်သက် ဖြစ်ပြီး ဂျွန် ရဲ့ မှော်အစွမ်းကို အသုံးချ သိမ်းသွင်းပြီး ခိုင်းချင်တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုအတွက် ဂွင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း သိခဲ့ရတယ်… ကျန်တာတွေကတော့ ဇတ်ရှိန်မပျက်အောင် ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်လိုက်ကြပါ ဂျွန် ကို လွမ်းနေတဲ့ Fan တွေ အတွက် အလွမ်းပြေ Animation Movie လေးက နည်းနည်းတော့ အလွမ်းပြေစေမှာပါ…
Dragon ball ဆိုတာ အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး ပရိသတ်အများအပြားရရှိထားတဲ့ animation ကားလေးတွေပါ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာတော့ Rating 8.3 အဆင့်ရှိတဲ့ Dragon ball animation မှနောက်ဆုံးသော Legendary super saiyan တစ်ယောက်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်ကားနာမည်ကိုက Dragon Ball Super:Broly ပါ ဒီဇာတ်ကားနာမည်အတိုင်းပဲ Broly ဟာ တိုက်ခိုက်ရေးမှာတော်တော်ကြမ်းပြီး မွေးကတည်းက unlimited battle power နဲ့မွေးဖွားခဲ့တဲ့ Saiyan တစ်ယောက်ပါ သူ့လို စွမ်းအားကြီးတဲ့ Saiyan တစ်ယောက်က ဘာကြောင့်အခုမှပေါ်လာတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာရှင်းပြသွားပါတယ် Broly ကမ္ဘာပေါ်ကို ရောက်လာခဲ့တာကလည်း Frieza ဆိုတဲ့ villain နဲ့ပေါင်းပြီး vegeta ဆီကိုလက်စားချေဖို့ရောက်လာခဲ့တာပါ ပြီးတော့ Goku နဲ့ Vegeta တို့ရဲ့battle power ဟာ ထိပ်တန်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေပါ ဒါပေမယ့် သူတို့တောင် ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ် တိုက်ခိုက်ရေးမှာ အကြမ်းဆုံးဆိုတဲ့ Beerus ထက်ပိုကြမ်းသလား ဆိုတာကတော့ မြုပ်ကွက်အနေနဲ့တမင်သက်သက်ကြီးကို ချန်ထားခဲ့တယ် Dragon ball ဆိုရင် Goku ကိုပဲပြေးမြင်မိမှာပါ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ Goku ကို သဘောကျတဲ့ပရိသတ်တွေ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်လောက်အောင်လည်း လုပ်ပြထားပါသေးတယ် နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောပြရရင်တော့ ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရထားပြီးဖြစ်တဲ့ ဒီ animation ဇာတ်ကားလေးဟာ အထူးညွှန်းဆိုစရာမလိုလောက်အောင် ရသစုံခံစားရစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်…
ပရိတ်သတ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Scooby Doo ကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေးပါ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ စကူးဘီဒူးတို့သူငယ်ချင်း တစ်စု နံပါတ် ၁၃ လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ စွမ်းအားကြီးတဲ့သူရဲတစ်ကောင်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမှာပါ။ ဒဏ္ဍာ ရီလိုလို တကယ့်ဖြစ်ရပ်လိုလိုနဲ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေ ကြီး ဗင်းဆင့်ရဲ့ပြဿနာကို သွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ဖရက်၊ ဒက်ဖနီ၊ဗယ်လ်မာ၊ ရှက်ဂီ၊ စကူးဘီ ဒူးနဲ့ မိတ်ဆွေလေး ဖလင်းဖလမ်းတို့ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို အားပါးတရ တွေ့မြင်ကြရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Animation တွေကိုမှကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်….
Mirai(2018)IMDb…..7.2,,,Rotten….92%”ကွန်” ဆိုတဲ့ ၄ နှစ်သားအရွယ်ကလေးလေးတစ်ယောက်၊ မိဘမေတ္တာတွေကို ပုံပြီးရနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမှ သူ့ဘဝထဲကို “မိရိုင်” ဆိုတဲ့ညီမလေးတစ်ယောက် ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ အဖေနဲ့အမေဆီကရနေကြ အာရုံစိုက်မှု အလိုလိုက်မှု စတဲ့ဂရုစိုက်ခံရမှုအားလုံးကလည်း ညီမလေးဖြစ်သူ “မိရိုင်”ဆီအလိုလိုရောက်ရှိသွားပါတယ်… ၄နှစ်သားအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မနာလိုမှု ဝမ်းနည်းကြေကွဲရမှုတွေက ညီမလေး “မိရိုင်” ဆီ ဒေါသအဖြစ်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ ဒီလိုမျိုး တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေတဲ့ “ကွန်” ဆီကို ညီမဖြစ်သူ “မိရိုင်” ကအနာဂတ်ကနေ လူငယ်အသွင်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ “ကွန်”တစ်ယောက်ဘယ်လိုထူးဆန်းမှုတွေရဲ့ကြုံလာရမလဲ “မိရိုင်” ကရော ဘာလို့အနာဂတ်ကနေ ရောက်လာရတာလဲ တစ်အိမ်လုံးရဲ့ဖူးဖူးမှုတ်ခံထားရတဲ့အချိန် ရုတ်တရက် လျစ်လျူရှုခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကရော အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲ စတဲ့မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဒါရိုက်တာ“Mamoru Hosoda” ရဲ့ ဇတ်ကားအသစ်ဖြစ်တဲ့ “Mirai” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်က အခုဆိုရင် Best Animation Film nomineeအဖြစ် ၉၁ ကြိမ်မြောက် Oscar ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာလည်း ပါနေပါသေးတယ်…ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Megumiပဲဖြစ်ပါတယ်…
Kung Fu Panda ဆိုရင် မသိတဲ့လူမရှိသလောက်ပဲကမ္ဘာမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီ Animation ကားလေးဟာMovie လောကမှာသာမက Game လောကမှာရော ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။1 နဲ့2ကို ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး ဇာတ်လမ်းဆုံးသွားပြီထင်နေခဲ့တုန်းမှာပဲ 2015 ခုနှစ်ရဲ့ Movie review တွေမှာ စတင်ကြော်ငြာပါလာခဲ့တော့အရမ်းကိုမျှော်လင့်ပျော်ရွှင်စောင့်စားခဲ့ရတယ်။အခုတော့ ကျွန်တော်တို့အချိန် CM အချိန်ရောက်ခဲ့ပြီ။ဒီဇာတ်ကားဟာ အရင်ကားတွေထက်ပိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးIMDb rating 7.8/10 ထိရရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုအနည်းငယ်ပဲပြောပြချင်ပါတယ်။ပိုရဲ့ ဆရာဖိုးဖိုးလိပ် ရဲ့ တိုက်ဖော်တိုက်ဖက် ကိုင် ဟာ ဝိညာဉ်ကမ္ဘာကသိုင်းဆရာတွေအားလုံးရဲ့ စွမ်းအင်တွေကို သိမ်းပိုက်ပြီးလူ့ပြည်ကိုပြန်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ လူ့ပြည်ကဆရာတွေအားလုံးရဲ့ စွမ်းအင် ချီ တွေကိုပါ သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒါကို တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် ပို တစ်ယောက်လက်ရှိအင်အားနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင် ချီရဲ့ အရှင်သခင် ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတော့မယ်။ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ ဆရာလိပ်က နှစ် ၃၀ လောက် တရားထိုင်ခဲ့ရပြီးဆရာရှီဖူမှာလဲ အဲ့အစွမ်းတောင် မရှိသေးတဲ့အတွက် ပိုတစ်ယောက်လမ်းစပျောက်နေချိန်မှာ သူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဖခင်ကသူ့ကို ချီရဲ့လျို့ဝှက်ချက်တွေ သင်ပေးဖို့ဆိုပြီးပန်ဒါရွာကို ပြန်ခေါ်သွားပါတော့တယ်။ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာတော့ဒီMovie ကိုDownload ဆွဲပြီးသာဆက်ကြည့်ကြပါတော့
<p>The Lego Movie 2: The Second Part (2019)အားလုံးသဘောကျကျတဲ့ lego တုံးလေးဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးရဲ့ ဒုတိယမြောက်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားလေးမှာတော့ အမ်နက်ဆိုတဲ့ အရာရာကိုအကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်ရှိသူလေးတစ်ယောက် သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာကို ဒပ်ပလိုဂြိုလ်သားတွေလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာကနေစတင်ထားပါတယ်။အရာရာမှာအကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီးတော့သဘောကောင်းတဲ့သူလေးဆိုတော့ငါတို့တွေက
သူငယ်ချင်းတွေပါဘာညာပြီးတော့စကားလေးနဲ့ဖောပြီးတော့ပြေငြိမ်းမယ်ကြံတာဟိုကလဲမရပါဘူး ဖိုက်ခံရတာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ သူတို့ကမ္ဘာမှာအရာအားလုံးပျက်သုဉ်းနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို စင်စတာအဖွဲ့အစည်းကဖမ်းခေါ်
သွားပါလေရော။ဒီတော့ အမ်နက်တစ်ယောက် သူ့သူငယ်ချင်းတွေနောက်ကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာကာသယာဉ်လေးဆောက်ပြီး အမှီလိုက်ပါတော့တယ်။ဆိုတော့ အမ်နက်တစ်ယောက်သူငယ်ချင်းတွေကို ကယ်တင်နိုင်ပါ့မလားသူ့
သူငယ်ချင်းတွေကိုရော စင်စတာ အဖွဲ့အစည်းကဘာကြောင့်ခေါ်ဆောင်သွားရတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်သိရှိဖို့အတွက် ဇာတ်ကားကိုဆက်ပြီးတော့ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။Legoဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတ်ကောင်လေးတွေကတော်တော်လေးကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြင်ဘတ်မန်းရဲ့ပုံစံကတကယ့်ကိုအသဲယားစရာလေးပါ(ကိုယ်တိုင်လဲချစ်လို့နေမှာပေါ့နော် ဟီး..ဟီးး..)</p>
Prince Caspian The Chronocles of Narnia 2
Peaceful Worrior (2006)
LEGO DC Batman: Family Matters (2019) ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဘရုစ်ဝိန်းတစ်ယောက် crime fighting အတွက်ပဲ အာရုံရောက်လွန်းနေရာကနေ တစ်နေ့ သူ့ကုမ္ပဏီကို ရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ Bat Family Member တွေဆီကို ထူးဆန်းစွာနဲ့ ဖိတ်စာတစ်စောင်စီ ရောက်လာခဲ့တော့တယ်။ ဖိတ်စာပို့တဲ့လူကလည်း သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီ သရုပ်မှန်တွေကို သိနေခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ဘတ်မန်းရောင်းလိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို ဗီလိန်တစ်ယောက်က ဝယ်လိုက်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ Advanced AI Technology ကို သုံးကာ Gotham မြို့ကြီးကို ဖျက်ဆီးဖို့ လုပ်ပါတော့တယ်။ LEGO animation ဖြစ်တဲ့အတွက် DC Character တွေကို ချစ်စရာLEGOပုံစံလေးတွေနဲ့ မြင်ရမှာပါ။ Gotham ရဲ့ Villain တွေလည်း အကုန်လုံးနီးပါး ပါဝင်ထားပါတယ်။ နောက်LEGO DC ကားအတွက် Credit Scene ကိုပါ ထည့်ထားပေးတာဆိုတော့ လုံးဝကြည့်ကောင်းမယ့် LEGO ကားတစ်ကားဆိုတာ ကျိန်းသေပါတယ်။
Marrying The Mafia 1 ရဲ့ အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ် IMDb Rate ကတော့6.1 ပဲဖြစ်ပါတယ် Marrying the Mafia2ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဂန်းစတား မိသားစုထဲက သားကြီးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ပုံဖော်ထားတာပါ မိရိုးဖလာ ဂန်းစတားလုပ်နေရာကနေပြည်သူ့ရှေ့နေမလေးတစ်ယောက်ကို ရင်ခုန်မိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်လို အကွေ့အကောက် အဝှေ့အဝိုက်တွေနဲ့အချစ်ကို ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဟာသလေးတွေနှောပြီး တင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ…ဒီကားလေးကြည့်ရင် ပါးစပ်မစေ့ရမှာသေချာကြောင်းဟာသချစ်သူများကို သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်….
ဒီကားလေးကတော့ Marrying The Mafia ကားရဲ့3ကားမြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအညွှန်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်Marrying the Mafia2မှာ ဂန်းစတားနဲ့ ရှေ့နေရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့…ဂန်းစတားလောကက ထွက်ပြီး ကင်ချီလုပ်ငန်းကိုစတင်တဲ့ မူလဂန်းစတား မိသားစုတစ်စုကိုအငြိုးကြီးခဲ့တဲ့ ရှေ့နေဘုံတစ်ယောက် ဘယ်လိုလက်စားချေပြီးဘယ်လို ပြဿနာရှာမယ်ဆိုတာ မြင်တွေ့ရမှာပါ…ထုံးစံမပြတ် ဟာသနှောထားတဲ့အတွက် ဟာသချစ်သူတွေလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဟာသဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ကြနော်
Marrying The Mafia ကားရဲ့ ၄ ကားမြောက်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်Marrying The Mafia5ကားလုံးကိုဒီမှာတခုချင်းစီဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခါတော့မာဖီးယားမိသားစုဟာဂျပန်ရောက်သွားပါပြီအသက်၂၂နှစ်ကတည်းကပြည်ထွက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတဲ့ဟုန်ဒွတ်ဂျာနဲ့သားတွေဟာ ပြည်ထွက်ခွင့်ပြန်ရတော့ ဂျပန်ကိုဈေးကွက်လေ့လာတဲ့အနေနဲ့သွားလည်ကြပါတယ်ဘဏ်မှာငွေလဲတုန်းဘဏ်ဓားပြနဲ့ကြုံပြီး သူ့တို့ပိုက်ဆံတွေယူသွားတဲ့ဓားပြနောက်ကိုလိုက်ကြရင်း ဂျပန်မှာတစ်ဝေ့လည်လည်ဖြစ်ရင်ဘာတွေကြုံရမလဲဆိုတာကိုထုံးစံအတိုင်းပါးစပ်မပိတ်ရအောင်ရယ်စရာတွေနဲ့ကြည့်ရမှာပါ ဒီတစ်ခါတော့မိသားစုသံယောဇဉ်ကိုအသားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်
Marrying The Mafia ဇာတ်ကားတွေရဲ့နောက်ဆုံးကားဖြစ်ပါတယ်5 ကားလုံးကို ဒီမှာဒေါင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်အရင်ကားတွေရဲ့အဆက်ပါပဲ..သရုပ်ဆောင်တွေတော့အပြောင်းအလဲရှိသွားပါတယ်သရုပ်ဆောင်တွေတော့ ပြောင်းသွားပေမယ့် ဘာမှန်းမသိတဲ့Mafia မိသားစုအရှုပ်တော်ပုံကတော့ အတူတူပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဘက်လိုက်တတ်တဲ့ အဖေကြီးကြောင့်ညီအစ်ကိုတွေကြား မတည့်ကြတဲ့ Mafia မိသားစုအကြောင်းပါ။ဒီတော့ အနှိမ်ခံ ညီအစ်ကို ၃ ယောက်က ဘယ်လိုတွေ သင်ခန်းစာပေးပြီးဘယ်လိုတွေ ပြဿနာရှာမယ်ဆိုတာရယ်… ဒီ သင်းကွဲမိသားစုကြီးပြန်လည်သင့်မြတ်မလားဆိုတာရယ်ကို ရယ်မောရင်း ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အဖြေရှာလိုက်ပါ…
ဒီကာတွန်းကားလေးကတော့ အံ့သြဖွယ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဝမ်းဒါးလန်းဆိုတဲ့ ပန်းခြံလေးအကြောင်း တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဂျွန်ဘယ်လီဆိုတဲ့ကလေးမလေးက စိတ်ကူးပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းကို ဉာဏ်ကောင်းပြီး အိုင်ဒီယာအသစ်အဆန်းတွေထွက်တတ်ပါတယ် သူ့အမေရယ် သူ့မျောက်ကလေး ပီးနပ်ရယ်နဲ့ ကစားကွင်းကြီးဖန်တီးတိုင်း တူတူဆော့နေကြပါပဲ ကစားကွင်းပုံစံငယ်လေးတောင် အိမ်မှာဆောက်ထားတဲ့အထိ ခိုင်ခိုင်မာမာစွဲနစ်ဆော့ခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ သူ့မိခင်နေမကောင်းတဲ့အတွက် အဝေးမှာ ဆေးကုသမှုခံယူရပါတော့တယ် အဲဒီအခါမှာပဲ သူ့အမေကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်စိတ်နဲ့ ပန်းခြံကိုလည်းဂရုမစိုက်နိုင် မဆော့နိုင်ဘဲ ပစ်ထားလိုက်မိပါတော့တယ် စိတ်ကူးထဲကကစားကွင်းလေးဆိုပေမယ့် အမှတ်မထင် အဲဒီကစားကွင်းက အပြင်မှာရှိနေခဲ့မှန်း..သူ့အရုပ်လေးတွေ အသက်ရှိနေခဲ့မှန်းကို သူသိသွားခဲ့ရပြီး ကစားကွင်းကြီးပျက်စီးတော့မယ့်ကိန်း သူ့အရုပ်လေးတွေ သေရတော့မယ့်ကိန်း ဆိုက်နေတာကိုလည်း သူမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့မယ် ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိဘဲ ဒီကစားကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးကို သူ့အနေနဲ့ ပြန်လည်ကယ်တင်ရပုံကို ရိုက်ကူးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ကာတွန်းကားဆိုပေမယ့် အချိတ်အဆက်မိမိနဲ့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်တွေ ယုံကြည်မှုတွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုပါ ထည့်ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ရဲ့ ဆန်းကြယ်ကိစ္စလေးတွေကို လိုက်ဖြေရှင်းနေရာမှာ
ထိခိုက်အန္တရာယ်ရမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ရဲမှူးကြီးက
နောက်ထပ်မလုပ်တော့ဖို့ ဘယ် ဆန်းကြယ်ကိစ္စကိုမှ
မပါဝင် မပတ်သက်တော့ဖို့ ကတိတောင်းသွားခဲ့ပါတယ်
ဖရက်ဒီ၊ ဒက်ဖနီနဲ့ ဗယ်လ်မာတို့ကတော့ အလွန်စိတ်ဆင်းရဲပေမယ့်
အတိုင်းထက်အလွန်ပျော်နေတာကတော့ ရှက်ဂီနဲ့ စကူဘီဒူးပါပဲ..
ရှက်ဂီက စရိတ်ငြိမ်းအပန်းဖြေခရီးထွက်ခွင့်ကို သူကြည့်နေကြ
ရှက်ဂီနဲ့စကူဘီက အရမ်းတွေတက်ကြွပြီး ချီတက်သွားပေမယ့်
ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်း ဆိုသလို သူတို့ကျွန်းပေါ်ခြေချလိုက်တာနဲ
့ ကျွန်းသူကျွန်းသား စုံတွဲက ထွက်သွားခိုင်းပါတော့တယ်
သူတို့အဆိုအရ ကျွန်းပေါ်မှာ ဇွန်ဘီတွေအပြည့်ပါတဲ့
သူတို့အရင်ကရောက်ဖူးတဲ့ မွန်းစကားကျွန်းက အိမ်ကြီးနဲ့
တစ်ပုံစံတည်းတူနေတာကို တွေ့ရပေမယ့် ဆန်းကြယ်ကိစ္စဆို
ဘာဆိုဘာမှ မတွေ့ဘူးလို့ ဘူးခံငြင်းချင်သူ သုံးယောက်သားကတော့
အတင်းကြီးကို ဒါကသာမန်ကိစ္စတွေပဲလို့သာ ငြင်းနေပါတော့တယ်
သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်း ဆန်းကြယ်မှုတွေ ဘာမှမရှိဘူးလား
ဘယ်လိုတွေဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကို ဒီကာတွန်းကားလေးမှာ ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
တွေးစရာလေး ရယ်စရာလေးတွေ နှောပြီး ကြည့်ရှုကြရမှာပါ
Wonder woman ဇာတ်လမ်းတွေထဲက ဝန်ဒါးဝူးမန်းတစ်ယောက်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပုံနဲ့ သူ့ရဲ့ဇာတိမွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ သစ်မီစစီရာကို ရန်သူတွေရဲ့လက်ကနေပြန်လည်ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံတို့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ အန်နီမေးရှင်းဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်. ဒီနှစ်မှထွက်ရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားသစ်ဖြစ်ပြီးတော့ အစပိုင်းတစ်ချို့ကအရင်နှစ်များကထွက်ရှိထားတဲ့ကားတွေအတိုင်း အနည်းငယ်တော့ဆင်တူဖြစ်နေပါတယ်. ဒါကလဲ ဝန်ဒါးဝူးမန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံရယ်ဆိုတော့လဲ ဒီအတိုင်းပဲရိုက်ရမှာပေါ့နော်. ဝန်ဒါးဝူးမန်းတစ်ယောက်သူ့ရဲ့အမိမြေကိုကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လောက်ထိ အမေဇုန်သူကောင်းတစ်ယောက်ပီသစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ.
ကလေးဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံး ကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေထဲက တစ်ခုကို Live action ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါပဲ။ ၉၀ဖွား အများစုကတော့ Lion King ကို အတော်ရင်းနှီးနေကြမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ပြောစရာတောင် လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီကားမှာလဲ သီချင်းတွေ၊ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ စကားစုတွေ အကုန်ပြန်ပါပါတယ်။ အမြင်သစ်နဲ့ ခံစားရမှာပါပဲ။ အသံသရုပ်ဆောင်တွေကတော့ အပြောင်းအလဲဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဥပမာ နာလာ နေရာမှာ ဘီယွန်စေး၊ ဇာဇူးရဲ့ မစ္စတာဘင်း အသံနေရာမှာ ဂျွန်အိုလီဗာ စသည်ဖြင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် မူဖာဆာရဲ့ အသံပိုင်ရှင်ကတော့ မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ ဂျိမ်းစ် အားလ် ဂျုန်း ပါပဲ။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ မြွေဖြူမိစ္ဆာအကြောင်းကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းကို အခြေခံပြီး ရှေ့မှာလည်း Live action ရော animation တွေရော ပုံစံအမျိုးမျိုး ထွက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုကတော့ ပိုကောင်းတဲ့ animation ရုပ်ထွက်တွေနဲ့ ပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာပါပြီရိုက်ချက်အလန်းတွေ နောက်ခံတီးလုံးအလန်းတွေ လှပတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့ ကြည့်ရှူ့သူကို ဆွဲဆောင်သွားမှာပါ…
တိုင်ဂတ်ဗယ်လီ ဆိုတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာရှိတယ်
အဲ့ရွာလေးမှာ ပစ္စည်းပို့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းက
ပစ္စည်းပို့တဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းခွေး ကြီးတွေက ကလေးတိုင်းအားကျရ တဲ့ သူတွေပေါ့
သူ့အိပ်မက်ပဲ အဲ့လုပ်ငန်းမှာ တခြားနေရာကနေ ဝန်ထမ်းဝင်လုပ်ရင်း
တနေ့မှာ ခွေးကြီးတွေက ပြန်ပေးဆွဲခံရတော့ သူဖြစ်ချင်တဲ့
ပစ္စည်းပို့သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို စုံစမ်းသိရှိသွားပြီး
ကာတွန်းကား ကောင်းကောင်းကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် လာပါပြီ။ရယ်လည်းရယ်ရတယ် ဇာတ်လမ်းလည်းမိုက်တယ်။အသံသရုပ်ဆောင်ထားသူတွေကတော့ မပြောရင်တောင်အသံကြားတာနဲ့ သိမယ့် ၂ ယောက်ပါပဲ။ဝယ်လ် စမစ်သ် ရယ် တွမ် ဟော်လန် ရယ်ပါ။ တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့ သူတွေပါပဲ။ဝယ်လ်စမစ်သ်က လန့်စ်စတာလင်ဆိုတဲ့ အရမ်းတော်တဲ့ စပိုင်တစ်ယောက်။သူက အရမ်းတော်ပေမယ့် တစ်ကိုယ်တော်ပဲ လှုပ်ရှားတတ်တဲ့သူ။တွမ်ဟော်လန်ကတော့ ဝေါ်တာ ဘက်ကက် ဆိုတဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်တီထွင်သူအူကြောင်ကြောင် ကောင်လေး အဖြစ် အသံသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဝေါ်တာရဲ့ တီထွင်ချက်တွေကိုအေဂျင်စီမှာ ဘယ်သူမှ အထင်မကြီးတဲ့အပြင် လန့်စ်ကိုပါပြဿနာ သွားလုပ်မိလို့ အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတော့တယ်။ဒါပေမယ့် လန့်စ်နဲ့ မျက်နှာတူလူဆိုးတစ်ယောက်ကြောင့် လန့်စ် တစ်ယောက် အထင်လွဲခံရပြီးထွက်ပြေးရတဲ့အခါမှာ မလွှဲမရှောင်သာ ဝေါ်တာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလွဲလွဲအချော်ချော်နဲ့ လူဆိုးကို အမိဖမ်းဖို့ ကြိုးစားရပါတော့တယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Animation ရုပ်ရှင်တစ်ကားအတွက် Box Office မှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးတဲ့ နီကျား နဲ့ ဇတ်လမ်းပုံစံ နဲနဲလေးကွဲသွားမယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ငယ်ဘ၀ အငွှေ့အသက်လဲ မပျောက်သလိုဒီဇတ်လမ်းက အတော်လေး ကောင်းလွန်းပါတယ်Animation မှာလဲ အရမ်းကို ကောင်းမွန်လွန်းတယ်Action ခန်းတွေ တစ်ဝကြီး ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအကြိုက်ပါလှပသေသပ်လွန်းပါတယ်ဒီဇတ်လမ်းမှာတော့ နီကျား ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို အသေးစိတ်ပြထားပါတယ်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ အကြာက ခွန်လွန်း တောင်ပေါ်ပုလဲလုံးလေး တစ်လုံး ဖွားမြင်လာခဲ့တယ်ပုလဲလုံးလေး က သူလိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကိုအလိုအလျှောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းကောင်းပေမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ရဲ့ စွမ်းအင်ကို သိမ်းမိရာကနေ စိတ်ဖောက်လာလို့ခွန်လွန်းတောင် သူတော်စင် က ပုလဲလေးကို ထိန်းသိမ်းပြီးမိစ္ဆာနဲ့ သူတော်စင် ဆိုပြီး ပုလဲ ၂ လုံး ထပ်ခွဲလိုက်ပြီးဂါထာအုပ် ပြီး တပည့်ဖြစ်သူ ဆရာတော် တစ်ပါးကိုထိန်းသိမ်းစေခဲ့တယ်….သူတော်စင် ပုလဲက လူ့ပြည်က စစ်သူကြီး မိန်းမဆီကိုယ်ဝန်မှာ ဝင်စားရမှာ ဖြစ်ပြီး မိစ္ဆာပုလဲ ကတော့ ၃ နှစ်နေရင်အလိုအလျှောက် ဖျက်စီးခံရမှာ ဖြစ်တဲ့ ကျိန်စာ နဲ့ ချူပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ အလွဲလွဲ အမှားမှားတွေ လုပ်တက်တဲ့ ဆရာတော်ကြောင့်သူတော်စင်ကြီး ပေးထားတဲ့ တာဝန်တွေက ပျက်စီးကုန်ပါတယ်သူတော်စင်ပုလဲ အခိုးခံလိုက်ရပြီး မကောင်းဆိုးဝါး ပုလဲ ကစစ်သူကြီး ဇနီးဆီမှာ ကိုယ်ဝန်တည်လိုက်ပါတယ်…မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးကတော့ မီးမိစ္တာ“နီကျား ” ဖြစ်ပါတယ်…
Arendelle နိုင်ငံက မင်းသမီးငယ်လေး Anna ဟာ သူ့အစ်မ Elsa ကို ညဘက်ကစားဖို့ သွားနှိုးပါတယ်။ဒါပေမယ့် မင်းသမီး Elsa မှာ ထူးဆန်းတဲ့ စွမ်းအားတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။နှင်းတွေ၊ ရေခဲတွေကို လိုသလိုဖန်တီးနိုင်တဲ့Elsa ဟာ သူ့ညီမလေးကို မတော်တဆ ရိုက်မိသွားပါတယ်။Elsa မှာ ရှိနေတဲ့ စွမ်းအားတွေအကြောင်းဘယ်သူမှမသိအောင် မိဘတွေက ဖုံးကွယ်ထားပြီးElsa ရဲ့ စွမ်းအားတွေအကြောင်း Anna ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲက ပျောက်သွားအောင်Troll ခေါင်းဆောင်ကြီး Grand Pabbie ထံ သွားပြီးအကူအညီတောင်းရပါတယ်။အကယ်၍ Elsa သာ Anna ရဲ့နှလုံးသားနေရာကို ရိုက်မိသွားရင် နှလုံးခဲပြီး သေသွားနိုင်တယ်လို့Grand Pabbie က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ မိဘတွေဟာ Elsa နဲ့ Anna ကို သပ်သပ်ဆီခွဲထားလိုက်ပါတယ်။ကံကြမ္မာဆိုးတွေဆိုတာ ဒီလိုနဲ့ ရပ်မနေပါဘူး။သူတို့လေးတွေ အရွယ်မရောက်ခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့ မိဘတွေဟာ ပင်လယ်ထဲမှာ မုန်တိုင်းမိပြီး ဆုံးပါးသွားကြပါတယ်။သူတို့မိဘတွေ ဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက် ၃နှစ်အကြာမှာ အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ Elsa ကို Arendelle နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်မအဖြစ် ဘိသက်သွန်းဖို့ စီစဉ်ကြပါတယ်။အဓိက စီစဉ်သူကတော့ Weselton နယ်စားကြီး ဖြစ်ပြီး Arendelleနိုင်ငံကနေ အကျိုးအမြတ်တွေ မျှော်ကိုးနေတဲ့သူပါ။နန်းတော်ကြီးကို အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Anna တစ်ယောက် မြို့တော်ကြီးရဲ့ လမ်းတွေကြားထဲလျှောက်သွားရင်း တောင်ပိုင်းကျွန်းတွေက မင်းသား Hans နဲ့ တွေ့သွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦး အဆင်ပြေပြီး Elsa ရဲ့ နန်းတက် ညစာစားပွဲမှာHans က Anna ကို ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် Elsa က သူ့ညီမကို Hans နဲ့ သဘောမတူတာကြောင့်ညီအစ်မနှစ်ယောက် ပြဿနာဖြစ်ကြပြီးဒေါသကြောင့် Elsa ရဲ့ စွမ်းအားတွေ ပေါ်သွားပါတယ်။သူ့မိဘမှာခဲ့တဲ့ အမှာစကားကို ချိုးဖောက်ပြီးသူ့ရဲစွမ်းအားတွေကို လူကြားထဲမှာ ပြလိုက်မိတဲ့ Elsa ဟာ တုန်လှုပ်သွားပြီးရှိရှိသမျှ စွမ်းအားတွေ အကုန်ထုတ်လွှတ်လိုက်မိပါတယ်။သူ့ရဲ့ စွမ်းအားတွေကြောင့် Arendelle ဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင်းတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်နေတဲ့ ထာဝရဆောင်းရာသီကို ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်း မြောက်ဖက်က တောင်တန်းတွေပေါ်ကို ထွက်ပြေးသွားပြီးရေခန်းနန်းတော်တစ်ခု ဖန်တီးနေထိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ အစေအပါးတွေအဖြစ် နှင်းရုပ်တစ်ရုပ်ကို ဖန်တီးထားလိုက်ပါတယ်။Anna ကတော့ သူ့အစ်မဖြစ်သူကို ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ မြောက်ပိုင်းဒေသကို လိုက်လာပါတယ်။လမ်းမှာ ရေခဲရောင်းတဲ့ Kristoff နဲ့သူ့ရဲ့ သမင်ကြီး Sven တို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ဝံပုလွေအုပ်လက်က လွတ်အောင် ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။Anna ဟာ Elsa ဖန်တီးထားတဲ့ နှင်းရုပ်ကြီး Olaf နဲ့ တွေ့ပြီးElsa ရဲ့ နန်းတော်ကို လိုက်သွားပါတယ်။Annaကရော သူ့အစ်မကို ပြန်ရှာတွေ့နိူင်ပမှာလား၊သူ့အစ်မကရော တိုင်းပြည်ကို ပြန်လိုက်ပမှာလား၊Aredelle နိူင်ငံကရော တစ်နှင်းပတ်လုံး နှင်းတွေ လွမ်းမိုးနေတဲ့ကျိန်စာက လွတ်နိူင်ပါ့မှာလား၊Annaအတွက် ချစ်သူအစစ်ကရော ဘယ်သူဖြစ်နေမှာလဲဆိုတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်ရမဲ့ နာမည်ကျော်ကာတွန်းကားဖြစ်ပါတယ်။Disney ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်ပို့ဇာတ်ကောင်တွေ၊လှလှပပ မြင်ကွင်းတွေနဲ့ ချစ်စရာ ဇာတ်ကောင်တွေကို အားပြုပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။IMDB Rating 7.5 ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာTomatometer 90% ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Movie Guide Facebook မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
ဒီဇာတ်ကားလေးက Animation ပေမယ့် . ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ဟာ အတော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းသလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချစ်တော်ကြီး ကွန်ဖူးပန်ဒါကိုတောင်သတိရသွားစေမယ့် ကားလေးပါ။ စစချင်းမှာပဲ ပန်ဒါနဲ့စဖွင့်ထားတာလေးကိုက အသက်ပါ။ ဖြစ်စဥ◌်ကတော့ သာယာတဲ့တောထဲမှာ နေထိုင်တဲ့ ဝက်ဝံကြီး မစ်စတာမစ် ဆိုတာရှိတယ်။ နောက်ပြီး သူလုံးဝကြည့်မရတဲ့ အော်စကာလို့ခေါ်တဲ့ တီထွင်ဥာဏ်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ ယုန်တစ်ကောင်လည်းရှိတယ်။တီထွင်ပြီး ရေကာတာဆောက်လိုက်လို့ မစ်စတာမစ်ရဲ့အိမ်ဟာ တစ်ခါရေမြုပ်ပြီးပြီ။ နောက်ထပ် အာကာသပေါ်သွားမယ့် စွန့်စားမှုကြောင့်လည်း မစ်ရဲ့ ပျားအိမ်တွေထပ်ပြိုကွဲရပြန်ပြီ။ အဲ့ကိစ္စကြောင့် မစ်ဟာ ယုန်လေးအော်စကာကို ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ . ကောင်းကင်ကနေ ကလေးတွေကို လိုက်လံပို့ဆောင်တဲ့ ဗျိုင်းတစ်ကောင်က ပန်ဒါပေါက်ကလေးကို ပန်ဒါကြီးတွေဆီပို့ရမယ့်အစား . ဝက်ဝံဖြစ်တဲ့ မစ် ဆီကိုမှာယွင်းပို့ဆောင်မိတာပါပဲ။ မစ်ဟာ အဲ့ပန်ဒါလေးရဲ့ နေရပ်အမှန်ကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့အတွက် ခရီးစထွက်တာကနေ The Big Trip ဆိုတဲ့ ခရီးစဥ◌်ကြီးစတင်တော့တာပါပဲ။ခရီးစဥ◌်တစ်လျှောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဥ◌်မျာ . ခရီးစဥ◌်တစ်လျှောက်ထပ်တိုးလာခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူရဲကောင်းလေး ကွန်ဖူးပန်ဒါကို သွားသတိရစေမှာ အမှန်ပါပဲ
Steven Universe (2019) ဒီကားကတော့ Gem တွေကို အသက်ရှိတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Animation ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ လူသားတစ်ဝက် Gemတစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့ Steven က စင်္ကြဝဠာတစ်လျှောက် ငြိမ်းချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းခန်းလေး ကျင်းပနေခဲ့တာပေါ့။ ဒီအချိန်မှာပဲ Gem တစ်ယောက်ရောက်လာပြီး သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့အခါ မျှော်လင့်မထားတာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ကြာမြင့်ချိန်ကလည်း မ‌ပြောပလောက်တဲ့အပြင် ဇာတ်လမ်းလေးကလည်းကောင်း Musical Type လည်းဖြစ်တာကြောင့် အတော်လေးကြည့်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။
One Piece Anime ရဲ့သက်တမ်း နှစ် ၂၀ ပြည့် ထုတ်တဲ့ ၁၄ ကားမြောက် ရုပ်ရှင်ပါ။ Sky Island ပီးနောက်ကြေငြာထားတဲ့ကားပါ။ One Piece ဖန်တိုင်းမျှော်နေခဲ့ကြတဲ့ကားပါပဲ။ ရုံမတင်တဲ့အပြင် အကြည်ကိုလည်ပင်းရှာမျှော်ခဲ့ရတဲ့ကားပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး 92 လုံးနဲ့ IMDB 8.1 ရထားပါတယ်။Time Line အနေနဲ့ ကတော့ Wano မရောက်ခင်နဲ့ Big Mom ကိုသွားကလိပြီးတဲ့ အချိန်ကြားလို့ယူဆရပေမယ့် Movie ထဲမှာ လုဖီရဲ့ ဆုကြေးက ၁၅ ဘီလီယံ ဖြစ်နေတော့ Wano အပြီးလို့လဲထင်စရာရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ Non-Canon ဖြစ်တဲ့အတွက် Timeline နဲ့မဆိုင်တော့သိပ်တော့ ခေါင်းစားစရာမရှိပါဘူး။ ကာရိုက်တာ Art ‌တွေအရ အခု Anime onging မှာ ရောက်နေတဲ့တစ်ဝိုက်လို့ပဲမှတ်ရပါတယ်။ဇတ်လမ်း က‌တော့ ပင်လယ်ဓားပြတွေအတွက်ကျင်းပတဲ့ ပင်လယ်ဓားပြပွဲတော်ကြီး ကို အမှတ်မရှိအမြဲကမြင်းကြောထချင်‌နေတဲ့ လူဖီ က ပင်လယ်ဓားပြဘုရင် အသံကြားပြီးတော့ ဖင်တကြွကြွဖြစ်နေတာကြောင့် ရောက်သွားရာကနေ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါပဲ။ ပင်လယ်ဓားပြပွဲတော်မှာ Gol D Roger ရဲ့ ရတနာတစ်ခုကို ပြိုင်လုတဲ့ပွဲတစ်ခု ပါခဲ့ပြီး ကျင်းပတဲ့သူက ရော်ဂျာခေတ်က ပွဲစီစဉ်သူတစ်ယောက်ပါ။(စပွိုင်==တကယ်က ငနဲသားရဲ့ စကောလောက်မှစောက်မနက်တဲ့အကြံနဲ့ ရေတပ်နဲ့ ပင်လယ်ဓားပြတွေကိုစိန်ခေါ်တဲ့ပွဲပါ။)တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရှိရှိသမျှ ပင်လယ်ဓားပြ‌တွေ လာပြိုင်ကြပြီး Sabaody မှာရေတပ်တွေကို မိုက်‌ကြေးခွဲသွားခဲ့တဲ့ Worst Generation ထဲက လူဖီ ရဲ့ မိတ်ဆွေမကျ ရန်သူမကျကောင်‌တွေပါ လာပြိုင်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘူးလက်ပေါ်လာပြီး အကုန်သမပါတယ်။ အများကြီးထပ်ညွှန်းရင် စပွိုင်ကြီးတွေမိကုန်ပါတော့မယ်။ Fight Scene အဂျွတ်ကြီးတွေပါပါတယ်။ကာရိုက်တာအပိုင်း‌လေးတွေထည့်ရရင်‌တော့ အကုန်နီးပါး ပါပါတယ်ဗျ Sabo ၊ Smoker ကစလို့ မြင်တာနဲ့ဖြတ်ရိုက်ချင်စရာဆုတောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ Kizaru၊ Crocodile၊ Cypher4၊ကလိန်ကကျစ် Foxy အဆုံး အကုန်နီးပါးပါပဲ။ Main Villain ဖြစ်တဲ့ Douglas Bullet အကြောင်း လေးပြောရရင် မူလက Galzburg ကစစ်သားပါ အဲ့ကနေ ပြဿနာတက် ပင်လယ်ထွက်ခဲ့ပြီး ရော်ဂျာကသူ့ကို အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့လို့ ရော်ဂျာဆီမှာ ဓားပြဝင်လုပ်ပါတယ် Demon Heir (နတ်ဆိုးအမွေခံလို့)သိကြပြီး ရော်ဂျာသေပြီးနောက် ဝေလေလေဖြစ်ပြီး အကုန်ပတ်ရမ်းနေရင်း ရေတပ်က B-Call နဲ့ ဖမ်းပြီး Impel Down ကိုပို့လိုက်ပါတယ် ထောင်ကို မုတ်ဆိပ်မဲ ဝင်အချောင်နှိုက်ချိန်မှာလွတ်သွားခဲ့ပြီး ဒီပွဲကျမှပြန်ပေါ်လာတာပါ။ Ability အနေနဲ့ တော့ ရော်ဂျာနဲ့တောင်ယှဉ်ချနိုင်ပြီး Rayleigh နဲ့တန်းတူရှိပါတယ် ။ ဆိုတော့ Physical Strength ကတော့ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ နတ်ဆိုးသီးကတော့ Gasha Gasha no Mi အသီး (Sound of metal clankingーတစစီဖြုတ်/တပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အစွမ်း) ဖြစ်ပြီးတော့ နိုးထတဲ့ အဆင့်ထိ Train ထားပါတယ်။ဒီကားမှာ အကြိုက်ဆုံးနဲ့ ကြက်သီးပါထမိတာတော့ လူဖီနဲ့ One/One ယှဉ်ဗျင်းတဲ့အချိန်မှာ We Are နောက်ခံသီချင်းနဲ့ အမှောက်တီးတဲ့အခန်းရယ် နောက်တစ်ခုက ဇတ်ကားပြီးခါနီး ひけん(Hiken)Fire Fist ဆိုတဲ့အသံနဲ့ ဆာဘိုဆီက မီးတန်းကြီးထွက်လာချိန် အေ့စ့် နဲ့ ဆာဘိုတို့ နှစ်ယောက်တွဲလျှက်ပုံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်တို့ပါပဲ။ Ace ဖန်‌တွေကို ငိုချင်ရက်လက်တို့တဲ့အခန်းပါ ။* မှတ်ချက်။ ။ကျနော်နောက်ဆုံးရှာပြီးတဲ့အချိန်ထိ စာဖိုင် အပြည့်အမှန်မထွက်သေးပါဘူး။ ကြည့်ဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဇတ်ကားအကြည်ရချင်း ရတဲ့စာဖိုင်ကို ဖြတ် ၊ညှပ် ၊ကပ်ပြီး ကြိုးစားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားပါရင် ဖန်များ ခွင့်လွှတ်ကြပါ
Weathering With You ( 2019 ) Other Name-(Japanese: 天気の子, Hepburn: Tenki no Ko, lit. “Child of Weather”) ========================== ကဲဗျာ Your Name ရဲ့ ရိုက်ကူးသူဖြစ်တဲ့ မာကိုတို နစ်ဆု ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ထပ်ပြီးတော့လာပြန်ပါပြီ။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့… အထက်တန်းကျောင်းသားလေးဖြစ်တဲ့ ဟိုဒါကာ မိုရီရှီမာ ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ သူရဲ့မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ တောအရပ်ကလေးကနေ ထွက်ပြေးလာပြီးတော့ တိုကျိုမှာအလုပ်လုပ်မယ့် အစီအစဉ်နဲ့ရောက်လာပါတယ်… အဲဒီအချိန်မှာ တိုကျိုဟာ မိုးများဆက်တိုက်ရွာသွန်းနေပြီးတော့ အလုပ်အကိုင်များအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ အချိန်တစ်ခုဖြစ်နေပါတော့တယ်… သူဟာအလုပ်လိုက်ရှာနေရင်းနဲ့ ဟီနာ ဆိုတဲ့ မက်ဒိုနယ် မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်မလေးဟာ သူ့ကို ညစာစားဖို့ မုန့်လေးတစ်ခု အလကားပေးလိုက်ပါတယ်… အဲဒီနောက်မှာ ဟိုဒါကာ ဟာ အလုပ်တစ်ခုမှာလုပ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ သူဟာတိုကျိုမှာဆက်ပြီးတော့ နေထိုင်နေပါတော့တယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာ တိုကျိုမြို့ကြီးရဲ့မိုးရွာသွန်းမှုဟာ သမရိုးကျ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲ အယူဝါဒတစ်ခုနဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ အင်တာနက်မှာ သတင်းပြန့်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် မိုးပေါ်က ငါးများ ကျလာတာတို့ အခြားသောအရာများ ပါဝင်လာတာတို့လည်း ထူးဆန်းစွာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်တစ်နေ့မှာ ဟိုဒါကာ ဟာ ဟီနာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့ဖြစ်ပြီး အဲဒီကောင်မလေးမှာ မိုးကိုတားနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိနေတာကိုထူးထူးခြားခြားသိလိုက်ရပါတယ်… အဲဒီတော ဟီနာဆိုတဲ့ကောင်မလေး ကဘယ်သူများလဲ .. သူဟာ အဲဒီလိုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ ဘယ်လိုများသက်ဆိုင်နေလဲ နောက်ပိုင်းမှာ ဟီနာက အဲဒီလိုလုပ်နိုင်တာကြောင့် အနစ်နာခံရမှာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ…. ဟီနာနဲ့ ဟိုဒါကာ ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကို….
ဒီဇာတ်ကားလေးက Animation ပေမယ့် . ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ဟာ အတော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းသလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချစ်တော်ကြီး ကွန်ဖူးပန်ဒါကိုတောင်သတိရသွားစေမယ့် ကားလေးပါ။ စစချင်းမှာပဲ ပန်ဒါနဲ့စဖွင့်ထားတာလေးကိုက အသက်ပါ။ ဖြစ်စဥ◌်ကတော့ သာယာတဲ့တောထဲမှာ နေထိုင်တဲ့ ဝက်ဝံကြီး မစ်စတာမစ် ဆိုတာရှိတယ်။ နောက်ပြီး သူလုံးဝကြည့်မရတဲ့ အော်စကာလို့ခေါ်တဲ့ တီထွင်ဥာဏ်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ ယုန်တစ်ကောင်လည်းရှိတယ်။တီထွင်ပြီး ရေကာတာဆောက်လိုက်လို့ မစ်စတာမစ်ရဲ့အိမ်ဟာ တစ်ခါရေမြုပ်ပြီးပြီ။ နောက်ထပ် အာကာသပေါ်သွားမယ့် စွန့်စားမှုကြောင့်လည်း မစ်ရဲ့ ပျားအိမ်တွေထပ်ပြိုကွဲရပြန်ပြီ။ အဲ့ကိစ္စကြောင့် မစ်ဟာ ယုန်လေးအော်စကာကို ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ . ကောင်းကင်ကနေ ကလေးတွေကို လိုက်လံပို့ဆောင်တဲ့ ဗျိုင်းတစ်ကောင်က ပန်ဒါပေါက်ကလေးကို ပန်ဒါကြီးတွေဆီပို့ရမယ့်အစား . ဝက်ဝံဖြစ်တဲ့ မစ် ဆီကိုမှာယွင်းပို့ဆောင်မိတာပါပဲ။ မစ်ဟာ အဲ့ပန်ဒါလေးရဲ့ နေရပ်အမှန်ကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့အတွက် ခရီးစထွက်တာကနေ The Big Trip ဆိုတဲ့ ခရီးစဥ◌်ကြီးစတင်တော့တာပါပဲ။ခရီးစဥ◌်တစ်လျှောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဥ◌်မျာ . ခရီးစဥ◌်တစ်လျှောက်ထပ်တိုးလာခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူရဲကောင်းလေး ကွန်ဖူးပန်ဒါကို သွားသတိရစေမှာ အမှန်ပါပဲ . . .။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့နီကျား ဆိုတဲ့ မီးခြေနင်း စီးပြီး မီးလှံ ကိုင်တဲ့ကြာဖူးနတ်သား ကို မှတ်မိကြသေးလား၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာပဲ Ne Zha ဆိုတဲ့ Animation ရုပ်ရှင်ကားကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပါတယ်… တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Animation ရုပ်ရှင်တစ်ကားအတွက် Box Office မှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးတဲ့ နီကျား နဲ့ ဇတ်လမ်းပုံစံ နဲနဲလေးကွဲသွားမယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ငယ်ဘ၀ အငွှေ့အသက်လဲ မပျောက်သလိုဒီဇတ်လမ်းက အတော်လေး ကောင်းလွန်းပါတယ်Animation မှာလဲ အရမ်းကို ကောင်းမွန်လွန်းတယ်Action ခန်းတွေ တစ်ဝကြီး ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအကြိုက်ပါလှပသေသပ်လွန်းပါတယ်ဒီဇတ်လမ်းမှာတော့ နီကျား ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို အသေးစိတ်ပြထားပါတယ်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ အကြာက ခွန်လွန်း တောင်ပေါ်ပုလဲလုံးလေး တစ်လုံး ဖွားမြင်လာခဲ့တယ်ပုလဲလုံးလေး က သူလိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကိုအလိုအလျှောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းကောင်းပေမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ရဲ့ စွမ်းအင်ကို သိမ်းမိရာကနေ စိတ်ဖောက်လာလို့ခွန်လွန်းတောင် သူတော်စင် က ပုလဲလေးကို ထိန်းသိမ်းပြီးမိစ္ဆာနဲ့ သူတော်စင် ဆိုပြီး ပုလဲ ၂ လုံး ထပ်ခွဲလိုက်ပြီးဂါထာအုပ် ပြီး တပည့်ဖြစ်သူ ဆရာတော် တစ်ပါးကိုထိန်းသိမ်းစေခဲ့တယ်….သူတော်စင် ပုလဲက လူ့ပြည်က စစ်သူကြီး မိန်းမဆီကိုယ်ဝန်မှာ ဝင်စားရမှာ ဖြစ်ပြီး မိစ္ဆာပုလဲ ကတော့ ၃ နှစ်နေရင်အလိုအလျှောက် ဖျက်စီးခံရမှာ ဖြစ်တဲ့ ကျိန်စာ နဲ့ ချူပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ အလွဲလွဲ အမှားမှားတွေ လုပ်တက်တဲ့ ဆရာတော်ကြောင့်သူတော်စင်ကြီး ပေးထားတဲ့ တာဝန်တွေက ပျက်စီးကုန်ပါတယ်သူတော်စင်ပုလဲ အခိုးခံလိုက်ရပြီး မကောင်းဆိုးဝါး ပုလဲ ကစစ်သူကြီး ဇနီးဆီမှာ ကိုယ်ဝန်တည်လိုက်ပါတယ်…မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးကတော့ မီးမိစ္တာ“နီကျား ” ဖြစ်ပါတယ်…ကဲ CM Fan တို့ ရေ Ne Zha ရုပ်ရှင်ဟာ WEB-DL အနေနဲ့ထွက်ရှိလာပြီး စာဖိုင် မမှန်သေးပေမဲ့ ဘာသာပြန်Nay Chii က ကြိုးစားဘာသာပြန်ပေးထားပြီးCM Admin ဖြစ်သူ Moe Myint Lwin မှ Encode ၍တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
Spirit Riding Free Spirit of Christmas 2019
Code Geas Lelouch of the Re Surrection 2019
Code Geass ဇာတ်လမ်းတွေထဲက နောက်ဆုံးထွက်ဇာတ်ကားလေးပါ။Show ရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်တွေစုစည်းပြီးနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကြီးတစ်ပွဲအဖြစ် ဖန်တီးထားတဲ့ကားပါ။Code Geass ဇာတ်လမ်းတွေမထွက်တာလည်း တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တုန်းက လီလုချ်က သူ့ကိုယ်သူစတေးပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကမ္ဘာကြီးက အခုချိန်မှာ လုံးဝငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်နေပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ လီလုချ်ကို အသက်ပြန်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။လီလုချ်ကို ပြန်အသက်မသွင်းခင်မှာ ဇီလ်ခ်စတန်နိုင်ငံကလူတွေကလီလုချ်ရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်အကြံပေး နူနာလီကိုပြန်ပေးဆွဲသွားကြပါတော့တယ်။Code Geass universe ထဲက Geass တိုက်ပွဲတွေmagical mecha တိုက်ပွဲတွေကို တစ်ဝကြီး ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
Scooby-Doo 2020 “friendship won’t save the day” တဲ့။ May 15 ရက်နေ့မှာ digital release အနေနဲ့ ဖြန့်ချိလာတဲ့ Scooby-Doo ရဲ့ ဇာတ်ကားအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Scooby ရဲ့ ဇာတ်ကားဆိုတော့ သရဲတို့ ၊ မိစ္ဆာတို့ကတော့ ပါပြီးသားပေါ့။ ဒီကားလေးမှာတော့ အားလံုးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Simon Cowell လည်း ပါ၀င်လာပါတယ်။ Simon ပြောထားတာကတော့ အဖွဲ့တစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် အလုပ်ကြိုးစားရမယ်၊ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရမယ်တဲ့။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ “friendship won’t save the day” တဲ့။ Simon ကြောင့်ပဲ Scooby တို့ သူငယ်ချင်း5ယောက်ဟာ အဖွဲ့ကွဲသွားပြီးတော့ Scooby နဲ့ Shaggy တို့က တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လည်း စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဆိုပြီး ဘိုးလင်းသွားဆော့တာ စက်ရုပ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်တာကို ခံရတယ်။ စက်ရုပ်တွေက ချစ်စရာ သေးသေးလေးတွေ။ ကျွန်တော်တောင် လိုချင်သွားတယ်။ ဒီစက်ရုပ်တွေကို ဘယ်သူက ခိုင်းတာလဲဆိုတာကို စုံစမ်းလိုက်တော့ အဲ့ဒီလူက Scooby ကို အလိုရှိနေတာတဲ့။ Scooby လို ခွေးကို အလိုရှိနေတာ ထူးဆန်းမနေဘူးလား။ Scooby ကို သူက ဘာလို့ လိုချင်နေတာလဲ။ Scooby တို့ကကော ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဘယ်သူတွေကကော Scooby တို့ကို ကူညီမလဲ။ နောက်ဆုံးမှာ Simon ပြောသလိုပဲ “friendship won’t save the day” ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ အဆင်ပြေသွားမလား။ CG Animation ကိုသုံးထားတာ‌ဆိုတော့ ရုပ်ကြွကြွလေးနဲ့ ကြည့်ရှုခံစား ရမှာပါ။ သဘောကျမယ်ဆိုတာ လုံး၀ အာမခံပါတယ်။
ကဲ Garfield တဲ့ . ဒီနာမည်လေးကြားတာနဲ့ကို မကြိုက်ဘဲနေနိုင်ဦးမလားခင်ဗျ။ 2004 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီး ကြည့်ဖူးသည့််သူတိုင်း ကလေးအစ လူကြီးအဆုံး အရမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ Animation နဲ့လူပေါင်းစပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ဇာတ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရယ်မောဖွယ်ရာဟာသတွေနဲ့ Garfield လို့ခေါ်တဲ့ အသိဉာဏ်အရမ်းကြွယ်ဝတဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ အရမ်းကိုပြည့်စုံလွန်းတယ်ထင်ရပါတယ်။ သူ့သခင်နဲ့ သူ့ရဲ့စကားပြောဆိုဆက်ဆံမှုဟာ ကြောင်နဲ့မတူဘဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာ ဒီဇာတ်ကားနာမည်ကြီးတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းထဲက တစ်ချက်ပါပဲ။ ကဲ . ကြည့်ပြီးသားလူတွေလည်း Channel Myanmar ရဲ့ ဘာသာပြန်တင်ဆက်မှုနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ကြပါ။ ကိုယ့်မှာကလေးတွေ တူ.တူမတွေရှိလည်း ဒီကားလေးကိုပြန်ပြကြပါ
ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးက အရင် Tangled ကားလေးရဲ့ အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်…ပထမကားမှာ ရာပွန်ဇယ်နဲ့ ယူဂျင်းတို့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပေမဲ့ လက်မထပ်ရသေးပါဘူး…ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲအကြောင်းလေးကို ထပ်မံဖြည့်စွက် ရိုက်ကူးထားတာလေးပါ…ကြည်နူးစရာကောင်းပြီး ရာပွန်ဇယ်ရဲ့ တောက်တဲ့လေးနဲ့ မြင်း မက်စီမက်စ်တို့ နှစ်ကောင်ရဲ့ အလွဲလေးတွေ စွန့်စားခန်းတွေကို ဟာသအနေနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်… ပြသချိန် ၆ မိနစ်ခွဲလောက်ပဲကြာပေမယ့် ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးဟာ ကြည့်ရကျိုးနပ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်… ခံစားအားပေးကြပါဦး.
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မားစ်ဂြိုလ်ပေါ်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ပိုးကောင်တွေကို သုတ်သင်ဖို့စေလွှတ်ခြင်းခံရတဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ကင်းလှည့်တပ်စုတစ်စုအကြောင်းပါ…ထိုတပ်စုဟာ ပညာသင်ယူလေ့လာနေဆဲတပ်စုတစ်စုဖြစ်ပြီးတော့ တကယ်တမ်း အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ အတွေ့ကြုံများတဲ့ တပ်စုတစ်စုလိုမားစ်ဂြိုလ်ပေါ်ကိုစေလွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်…တိုက်ပွဲအတွေ့ကြုံမရှိတဲ့အပြင် တကယ်တမ်းပိုးကောင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါထိုလူငယ်တပ်စုဟာအမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်….အားလုံးကလည်း မားစ်ဂြိုလ်ပေါ်မှာထိုတပ်စုကို သေဆုံးသွားကြပြီလို့လည်းယူဆကြပါတယ်..ဒါကြောင့် အာကာသပိုင်ဗိုလ်ချုပ်ကနေ ထိုမားစ်ဂြိုလ်ကိုအပြီးတိုင်ဖောက်ခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်..လူငယ်တပ်စုဟာ မားစ်ဂြိုလ်ပေါ်ကနေများပြားလှတဲ့ ပိုးကောင်တွေကိုအချိန်မှီဖယ်ရှားပြီးတော့သူတို့နေထိုင်ရာ ယာဉ်ဆီကို အမြန်ဆုံးပြန်နိုင်မလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်….Animation ကြိုက်သူများအတွက်ကတော့ ရုပ်ထွက်ပီပြင်တဲ့ Animation ကားဖြစ်တဲ့အပြင်ဇာတ်လမ်းသဘောအရပါ ကောင်းမွန်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်….
ဒီကာတွန်းရုပ်ရှင်လေးဟာ တရုတ်ပြည်ကြီးမှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ကို ပြန်လည်ပြီး ဇတ်လမ်းဖွဲ့ ရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်… တိုင်းပြည် စစ်ဖြစ်နေချိန်မှာ ယခင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သက်ကြီးစစ်သားဟောင်းများကို ပြန်လည် ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် အကယ်၍ သက်ကြီးစစ်သားနှင့်အရာရှိများက စစ်ထဲ မလိုက်နိုင်အောင် ကျန်းမာရေး ဆိုးဝါးနေခဲ့ရင် အိမ်တွင်ရှိသော သား တူ မြေး ယောင်္ကျားသား တစ်ဦးစီကို စစ်ထဲသို့ ပို့ပေးပါရန် ဘုရင်မင်းမြတ်က အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်… အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ မုလန် ရဲ့ အဖေဆီသို့ ထိုစာချွန်လွှာ ရောက်လာတဲ့အချိန် ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့တဲ့ အဖေကို ကြည့်ရင်း တစ်ဦးထဲသော သမီးဖြစ်သူ မုလန် ဟာ ကွယ်လွန်ပြီးသော ဘိုးဘွားတွေ ရဲ့ မှတ်တိုင်များရှေ့တွင် ဆုတောင်းပြီး ဖခင် မသိအောင် ဖခင်စစ်ဝန်တန်ဆာတွေ ခိုးဝတ်ကာ ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်… ယောင်္ကျားလေးကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ပြီး စစ်မြေပြင်ကို ထွက်ခွာသွားသော ဖခင်ချစ်တဲ့ မုလန် လေးကို မြင်တဲ့ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ ဘိုးဘွားများဟာ အရေးပေါ် အစည်းဝေးခေါ်ပြီး မုလန် အား စောင့်ရှောက်ရန် အိမ်စောင့်ထားသော နဂါးလေး မူရှုး ကို မုလန် အနားတွင် နေစေရန် စေလွှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်… စစ်တပ်ထဲတွင် မိန်းကလေးမှန်း မသိအောင် ဟန်ဆောင်နေရပြီး အခက်အခဲများစွာ တွေ့ရမယ့် မုလန် တစ်ယောက် စစ်ပွဲကြီးတွင် အောင်နိုင်ပါ့မလား အိမ်ပြန် ဖခင်ကြီးနဲ့မိခင်ကြီး တို့ကို တွေ့နိုင်ပါအုံးမလားဆိုတာ ဟာသ ရသ စုံလင်လှတဲ့ Mulan ကာတွန်းရုပ်ရှင်လေးကို ကြည့်ပြီး အဖြေရှာကြည့်လိုက်ကြပါ…
ဒီကားလေးကတော့ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် animeဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။လေထဲပေါလောပေါ်နေတဲ့လပျူတာကျွန်းရဲ့ ရဲတိုက်ကြီးထဲမှာ ရတနာတွေရှိတယ်လို့ရှေးလူကြီးတွေကပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့ ကာင်လေးပါဇုဆီကိုမှော်ဆန်ဆန်လေထေဲကကျလာတဲ့ကောင်မလေးရှီးတတို့စတင်တွေ့ဆုံရာက အစပြုတယ်။ရှီးတရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်လည်ဆွဲကိုစစ်အစိုးရနဲ့ဓားပြအုပ်စုတွေဝိုင်းလုယက်ရင်းပါဇုဆီရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့။စစ်အစိုးရနဲ့ဓားပြအုပ်စု၂ဖွဲ့လုံးဟာဒီကျွန်းကိုအပြိုင်အဆိုင်ရှာဖွေကြရင်းဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါအုံး
IMDb 7.9 တောင်ရထားတဲ့ ကားဆိုတော့ ကာတွန်းကားဆိုပြီး အထင်သေးလို့မရတဲ့အပြင် နာမည်ကြီး ကာတွန်းရုပ်ရှင် Spirited Away ကိုဖန်တီးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာကပဲ ဆက်လက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေတခါက၁၄နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူလေး Shizuku ဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ Tokyo မြို့မှာနေသတဲ့…သူဘဝကလည်းပုံမှန်ကျောင်းသူတယောက်လိုပါပဲ… ဒါပေမယ့် တခုထူးခြားတာက Shizuku ဟာကျောင်းပိတ်ရက် ဆိုတာနဲ့ဒေသခံစာကြည့်တိုက် သွားပြီးရှိသမျှFairy Tale (အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ကလေးပုံပြင်ပေါ့) စာအုပ်တွေငှားဖတ်လေ့ရှိပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစာရေးသူတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့သူပါ… ဒါမယ့် သူစာအုပ်တွေဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း နာမည်တခုနဲ့ ရင်းနှီးလာတယ်…သူငှားဖတ်သမျှစာအုပ်တိုင်းရဲ့ငှားဖတ်သူစာရင်းကဒ်မှာ Seiji ဆိုတဲ့ကောင်လေးကသူ့ရှေ့အမြဲရောက်နေတယ်…ဒီတော့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းခလေးသဘာဝအတိုင်း မမြင်ဘူးတဲ့ကောင်လေးကိုပဲအထင်ကြီးမိပြီး သံယောဇဉ်တွယ်သွားတယ်တဲ့…ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာ Shizuku က သူ့အဖေကို ထမင်းဘူး သွားပို့ပေးရင်းရထားစီးလာရာမှာရထားပေါ်ကိုမှတ်တိုင်တခုမှာကြောင်ကြီးတကောင်ကတက်လာပြီး Shizuku အတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်သွားတာပေါ့…ပိုထူးဆန်းတာကကြောင်ကြီးကလူအတိုင်းပဲ သူဆင်းချင်တဲ့မှတ်တိုင်မှာဆင်းသွားတယ်တဲ့… ဒါနဲ့ကြောင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ Shizukuကနောက်ကလိုက်ရင်း Alice ကနေ Wonderland ရောက်သလိုဖြစ်သွားမလားဆိုတာ ?? စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်လက်ရှုစားကြပါသီချင်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ် အမှားပါတာရှိ ခွင်.လွတ်ကြပါကုန်Japan Anime တွေထုံးစံအတိုင်း ဇကားအပြီးမှာတော့ မက်ဆေ့ချ်တခုတော့ ရစမြဲမို့ ဒေါင်းယူကြည့်သင့်ပါတယ်ဗျာ
မိဘနှစ်ပါးရဲ့ အလိုလိုက်ချင်းကိုခံထားရတဲ့ တင်ဆိုတဲ့ကလေးလေးဘဝထဲကို ညီလေးတစ်ယောက် ယောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကလေးပေါက်စကို မနာလိုလည်းဖြစ် မသင်္ကာတဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူ တင်မ် ဟာ လျို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရင်းဘော့စ်ဘေဘီလေးရဲ့ လျိုှုဝှက်ချက်ကို သိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ညီမြန်မြန်ထွက်သွားစေဖို့အတွက် သူ့ညီရဲ့လျို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးကို လိုက်ကူညီရင်း ကမ္ဘာပေါ်က ကလေးတွေရဲ့ချစ်ခြင်းကို လုယူမယ့် ဗီလိန်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါ…..။ဒါရိုက်တာ Tom McGrath က ရိုက်ကူးပြီးဇာတ်ညွှန်းရေးသူကတော့ Michael McCullers ပါ။ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ နောက်ခံစကားပြောသူတွေအနေနဲ့ကတော့ Boss Baby အဖြစ်Alec Baldwin နဲ့ Older Tim အဖြစ်Patton Wswalt တို့က အဓိကပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။20th Century Foxကုမ္ပဏီက ရိုက်ကူးပြီး မတ် ၃၁ ရက်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီကာတွန်းကားလေးကတော့ ဂြိုဟ်သားတစ်စု ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခု
ရှာဖွေဖို့ ရောက်လာရင်း ကိစ္စပေါင်းစုံ ကြုံရတဲ့အကြောင်းကို
မက်စ်ဆိုတဲ့ကြောင်လေးက အင်မတန်မှကို နာမည်ကြီးချင်တဲ့ကြောင်လေးပါ
ဒါပေမယ့်လည်း သူသီချင်းဆိုရင် ကားပေါ်က ကန်ချတဲ့သူက ကန်ချ၊
နားပိတ်ထားတဲ့သူကပိတ်ထား ထွက်ပြေးတဲ့သူကပြေး ဖြစ်ရလောက်တဲ့အထိ
သီချင်းဆိုကောင်းသူပါ ဘော့ကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းဖျံလေးပါ
သူတို့နှစ်ယောက်အေးရာအေးကြောင်း နေလာရင်းနဲ့ တစ်ရက်မှာတော့
သူတို့နားကို ပန်းကန်ပြားပျံကြီး ပျက်ကျလာပါတော့တယ်
သူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ တစ်ဖွဲ့ကတော့ ရန်လိုတာမှ အတိုင်းထက်အလွန်ပါ.
ပါသွားတဲ့အခါမှာတော့ မက်စ်ခမျာ ပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့လုပ်ရပါတော့တယ်
နောက်ဆုံး မက်စ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်နိုင်မလဲဆိုတာ ပိတ်ကားထက်မှာ
ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါစို့ မတူညီပေမယ့် ကွာခြားပေမယ့်
အသက်ပဲပေးရ ပေးရ ဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်တွေကိုလည်း
ဒီကားလေးကတော့ ဒီလထဲမှာပဲnetflixကထွက်ထားတဲ့ အသစ်စက်စက် ကာတွန်းကားလေးဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကားလေးဖြစ်ပါတယ်
ကားထဲမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်’ရီးစ်’ဟာ ဆယ်ကျော်သက် ဂိမ်းမာ ကောင်လေးပါ စာလည်းညံ့ပီးအပေါင်းအသင်လည်းမရှိပါဘူး ဂိမ်းမှာတော့ အရမ်းကျွမ်းကျင်ပီး နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပါပီ
ဂိမ်းထဲမှာက ဂိမ်းဇာတ်ဆောင်ကပ္ပတိန် လိုက်စပိစ်နဲ့ ဗီလိန် ဒေါက်တာအာကန်နီးစ်တို့ပါပါတယ် အာကန်နီးစ်ကအစွမ်းတစ်စက်မှမရှိတဲ့သူပါ အစွမ်းတွေရအောင် ကပ္ပတိန်ရဲ့ကလေးတွေကို တစ်နေ့မှာခိုးသွားခဲ့ပါတယ် ကလေးတွေကလည်းလက်ဆော့ရင်း အာကန်နီးစ်ဆီကလွတ်လာတဲ့အချိန်
ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ ရီးစ်က နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်ဖို့ ဂိမ်းထဲကသတိပေးထားတာကိုလျစ်လျူရှုပီး တံခါးပေါက်ကိုဖွင့်မိပါတယ်
သူဖွင့်မိတဲ့အပေါက်ကနေ ကလေးတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ် တစ်ဖက်ကလည်းဒေါက်တာအာကန်နီးစ်က ကလေးတွေကိုအသည်းအသန်လိုက်ရှာပါတော့တယ်
အဖေဖြစ်တဲ့ ကပ္ပတိန် လိုက်စပိစ် ကလည်း သူ့ကလေးတွေအာကန်နီးစ်လက်ဆီမရောက်အောင် ကာကွယ်ဆိုပီး လိုက်ရှာနေပါတယ်
အာကန်နီးစ် လက်ထဲပဲကလေးတွေ ရောက်မလား အဖေကပဲပြန်ရှာတွေ့မလား ကလေးတွေရောက်လာတဲ့ ရီးစ်ကရော ဘာဆက်လုပ်မလဲ အကုန်လုံးထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါဘာတွေဖြစ်ကြမလဲ ဆိုတာ ဒီကားလေးပဲ ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါလို့
IMDb 6.9/10 Rotten Tomatoes 71% ရရှိထားတဲ့ Disney ဇာတ်ကားအသစ်လေးပါ။
ကလေးရော လူကြီးရော အကြိုက်တွေ့မယ့်ကားပါ။
ကလေးတွေကြည့်ပြီး စံထားစရာ ဇာတ်ကောင်တွေ စကားတွေ အများကြီးပါ,ပါတယ်။
Silverback မျောက်ဝံကြီး Ivan ဟာ သူနေ,နေရတဲ့
Markရဲ့ပြပွဲရုံထဲက ဘဝကို ငြီးငွေ့နေသူပါ။
Markရဲ့ တိရစ္ဆာန်ပြပွဲ အဖွဲ့မှာ Stella ဆိုတဲ့ ဆင်အိုမကြီးတစ်ကောင်လည်း ရှိတယ်။
Stella က Ivan မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနဲ့ အမျှော်အမြင်အရှိဆုံးသူပေါ့။
Markက ပြပွဲ အရှုံးပေါ်နေချိန် ပွဲကြည့်သူများလာဖို့
Ruby ဆိုတဲ့ ဆင်ပေါက်လေးကို တင်ဆက်ပြသဖို့ ဝယ်ယူခဲ့တယ်။
Ruby လေးကို သူ့လို ကျဉ်းကျပ်တဲ့ ဘဝမှာ မနေစေလိုတဲ့
Stella ဟာ Ivan ကို ကတိတစ်ခုနဲ့အတူ အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။
Ivan က Stella အပေါ်ထားခဲ့တဲ့ ကတိကို တည်ဖို့ကြိုးစားရင်း
သူမေ့ထားတဲ့ သူ့ရဲ့အတိတ်ကို တစ်စပြီးတစ်စမှတ်မိလာတဲ့နောက်…
မနေ့ညက ပရိသတ်တွေအတွက် လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ DCFandome ကြီးပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ကြည့်ပြီးတဲ့လူတွေရှိသလို မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေကလဲ Facts လေးတွေ Trailer လေးတွေရှာပြီး သွားကြည့်လိုက်ပါဦး။
ပွဲနေ့မှာပဲ ထွက်ရှိလာတဲ့ DC က ရုပ်ရှင်ကတော့ Superman: Man of Tomorrow ပါ။ DCAMU ကလဲ ထုတ်စရာတွေထုတ်ပြီး သွားစရာရှိတာတွေ သွားနေသလိုပဲ Stand-alone films တွေကလဲ ဆက်သွားနေဆဲပါ။
Superman: Man of Tomorrow မှာတော့ Superman စပြီးဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လယ်တောထဲက လင်မယားနှစ်ယောက်ကကောက်ရခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကနေ Metropolis မြို့ရဲ့ သူရဲကောင်းကြီး Superman ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ Superman အပြင် မပါမဖြစ်ကတော့ Lois Lane ပါ။ Lois အပြင်နောက်ထပ်ပါကြမှာကတော့ Lex Luthor Lobo Martian Manhunter နဲ့ Parasite တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Stand-alone films ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရှေ့ကရုပ်ရှင်တွေလဲ ပြန်နွှေးစရာမလိုသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ Superman နဲ့ Metropolis ရဲ့ ပြည်သူတွေ ဘယ်လို စတင်ပြီးတွေ့ဆုံသွားကြတယ်ဆိုတာကို DC ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။
Octonauts and the caves of sacactun
ဒီကားကတော့ Animation ကားလေးပါ။2010 လောက်တည်းက tv series အနေနဲ့ပြလာခဲ့တာပါ။ကလေးတွေ လူငယ်တွေ အကြိုက်တွေ့ပြီး တကယ်လည်း ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
အခုကားအစမှာတော့ Octonauts လေးတွေက Coba ဆိုတဲ့အကောင်လေးကို သူ့အိမ်ဖြစ်တဲ့ caribbean ပင်လယ်ဆီ ပြန်ပို့ကြမှာပါ။
Coba ကို အိမ်ပြန်ပို့ဖို့အတွက် captain ရယ် peso ရယ်က တာဝန်ယူပြီး သူတို့ ယာဉ်လေးနဲ့ ထွက်လာပါတယ်။ဒါပေမယ့် အမှတ်မထင် သူတို့ယာဉ်ပျက်ကျလို့ တောတစ်ခုထဲ ရောက်သွားပါတယ်။
တောထဲက ရေရှိတဲ့နေရာဆီသွားရင် ရေအောက်ဂူထဲ ရောက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဂူရှေ့က အစောင့် အကောင်လေး ၂ ကောင်ကလည်း ဒီထဲကို ဝင်သွားတဲ့သူတိုင်း ပြန်ထွက်မလာကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း Captain နဲ့ Peso တို့ Coba ကိုခေါ်ရင်း ဆက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုဘက်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ octonauts လေးတွေကလည်း အချက်ပြတာဘာမှမတွေ့ ခေါ်လို့လည်း မရတာနဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
လာကယ်ကြတဲ့ octonauts လေးတွေကရော ရေအောက်ဂူထဲ ရောက်နေတဲ့ Coba တို့ကို တွေ့နိုင်မလား၊ ရေအောက်ကမ္ဘာထဲ ဘယ်လိုစွန့်စားကြမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရမှာပါ။
Character အကောင်လေးတွေကလည်း တကယ် ချစ်ဖို့ကောင်း၊ ဇာတ်လမ်းကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ ကြည့်ကြဖို့ recommend ပေးပါတယ်နော်။
သာယာလှတဲ့တောမြို့လေးမှာ Isabelleဆိုတဲ့ ဂီတဆရာမဟောင်းတစ်ယောက်ရှိပြီး ဈေးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဥစားကြက်မတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်
လှပတဲ့ကြက်မတွေအများကြီးရှိပေမယ့် ဥလဲမချနိုင် ရုပ်ဆင်းအဂါၤသိပ်မလှရှာတဲ့Turulecaလို့ခေါ်တဲ့ ကြက်မလေးကို မျက်စိကျမိတဲ့အချိန်မှာ ဆိုင်ရှင်က အကောင်းဆုံးဥစားကြက်မပါဆိုပြီး လိမ်ရောင်းလိုက်ပါတယ်
ဒါကိုမသိရှာတဲ့ Isabelleဟာ ကြာလာတော့ သတိထားမိပြီး ကြက်မလေးTuruအတွက် ဥချဖို့အားပေးတဲ့အနေနဲ့ သီချင်းစပ်ပေးပြီးအမြဲဆိုပြပါတယ်
တစ်နေ့မှာ အသံကြားတဲ့အတွက် သွားကြည့်ရာTuruသီချင်းဆိုနေတာကိုအံသြစရာတွေ့လိုက်ပါတယ် Isabelleတစ်ယောက်ဝမ်းသာအားရနဲ့ စကားပြောတတ်အောင်သင်ပေးပြီး
မကြာခင် Isabelleချော်လဲကာ အသိစိတ်မဲ့သလိုဖြစ်ပြီး မြို့တော်ကဆေးရုံကိုတင်လိုက်ရပါတယ်
Turuကလဲ Isabelleကိုတွေ့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန် အရှုံးပေါ်ပြီးအသိမ်းခံရမယ့်ဆဲဆဲ ဆပ်ကပ်အဖွဲ့နှင့်တွေ့ရာ
သူမရဲ့ပါရမီနဲ့ကူညီပေးပြီး Isabelleကို လိုက်ရှာဖို့ကြိုးစားချိန် ဝင်ရောက်လာသောအနှောင့်အယှက်တွေကို
ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမယ့် မိသားစုကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
Samsamဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားက ပါဝါတွေမရှိရင်တောင် ရဲရင့်မှု.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဇွဲလုံ့လသာရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်အရာမဆိုဖစ်မြောက်နိုင်ကြောင်း ကိုရိုက်ကူးပြထားတာဖစ်ပါတယ်..
ဆမ်ဆမ်က ဆမ်ဂြိုလ်ကကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ ပုံမှန်သူ့အရွယ်တွေဆို ပါဝါတစ်ခုဆီစရနေကြပါပြီ ဒါပေမဲ့ ဆမ်ဆမ်ကပါဝါမရသေးပါဘူး
မာသ်ဂြိုလ်ကဘုရင်က ကလေးတွေကိုမုန်းတီးပါတယ် တစ်နေ့မှာ မာသ်ဂြိုလ်ဘုရင်ရဲ့ သမီး မက်ဂါ ကအထီးကျန်ပြီး သူငယ်ချင်းလိုချင်တာနဲ့ ဆမ်ဆမ်တက်တဲ့ကျောင်းကိုသွားတတ်ရမှ ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်
မက်ဂါက အဲ့ဒီ့ကျောင်းသွားတတ်နေချိန်မှာ ဆမ်ဆမ်တို့ကိုမာသ်ဂြိုလ်ကလာတယ်ဆိုတာကို လျို့ဝှက်ထားပါတယ်
ရုပ်အမှန်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ မက်ဂါ့ကိုလဲမုန်းတီးလာကြပါတယ် လက်စားချေဖို့စီစဉ်နေတဲ့ မာသ်ဘုရင်က အကောင်ကြီးကိုဖန်တီးလိုက်ချိန်မှာတော့ သူ့သမီး မက်ဂါ့ကို မတော်တဆထိခိုက်သွားပါတော့တယ်
အဲ့ဒီတော့မာသ်ဘုရင်ဟာ ဆမ်ဆမ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကောင်ကို ချေမှုန်းဖို့ကြံစည်ရပါတော့တယ်
ဒီတော့ ဆမ်ဆမ်တို့ မက်ဂါ့ကိုကယ်ပြီး အကေင်ကြီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ရင်ခုန်စွာကြည့်ရှုရမှာပဲဖစ်ပါတယ်…
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ GC ပရိသတ်ကြီးကို ရယ်စရာ သိပ္ပံကာတွန်းကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
အိမ်မှာ မောင်လေး ညီမလေးတွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေရှိကြလား သူတို့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အကောင်းပဲပြောပြီး ကိုယ့်ကိုကျ မယုံကြဘူးလေ ဟုတ်တယ်မလား
ဒီဇာတ်ကားထဲက Candace ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ဒီလိုခံစားချက်မျိုးခံစားနေရတဲ့သူပေါ့
နွေရာသီပိတ်ရက်မှာ Phineas နဲ့ Ferb ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့မောင်လေးနှစ်ယောက် အရုပ်တွေကို တီထွင်ဆော့ပြီး ပျော်နေသလောက် သူကတော့ သူပြန်ပြောသမျှ သူ့အမေမယုံလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူပါ
တစ်နေ့မှာတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အတူ ဂြိုလ်သားတွေနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုကို ဖမ်းခေါ်သွားခံရရော
ဒါကို သိသွားတဲ့ Phineas နဲ့ Ferb က သူ့အစ်မကို သွားကယ်တင်ကြတာပေါ့
ကြားထဲက အလွဲလွဲအချော်ချော်နဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတီထွင်ထားမှုတွေကလည်း ရယ်စရာပါ
မောင်လေးနှစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ Candace တစ်ယောက် ဂြိုလ်သား ကမ္ဘာကိုရောက်သွားတာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ ဒီကာတွန်းကားလေးကို ကြည့်ရှုကြပါဦး
ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ ချာတိတ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ “ဒန်နီ”က မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့
ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေစုဝေးနေတဲ့ ခရန်စတန်သိပ္ပံကျောင်းကိုတက်ဖို့ ပညာသင်ဆုရခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ဆရာ ပါမောက္ခစတန်ကတော့ ဒန်နီ့ရဲ့တီထွင်မှုတွေကို အထင်မကြီးဘဲ အမြဲနှိမ်ချဆက်ဆံလေ့ရှိတယ်။
ဒန်နီတစ်ယောက် မခံချင်စိတ်နဲ့ ပရောဂျက်အကြီးကြီးလုပ်ပြဖို့ နည်းလမ်းရှာတေ
ာ့ လွန်ခဲ့ဆယ်နှစ်လောက်က ရုတ်တရက်ပျက်စီးသွားလို့ ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုကို သွားတွေ့ပါတယ်။
ပျက်စီးနေတဲ့ ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို အသစ်ပြန်မွမ်းမံဖို့ ကြိုးစားရင်းကနေ ကြောက်ဖို့ကောင်းလှတဲ့
မွန်းစတားသတ္တဝါမျိုးစုံ နေထိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုရဲ့ ဝင်ပေါက်ကို မတော်တဆ ဖွင့်မိသွားတဲ့အခါမှာတော့…..
တောရိုင်းထဲမှာ နေထိုင်ကျက်စားနေတဲ့ ဝက်ဝံသားအဖလေးနှစ်ကောင်
မိခင်ဖြစ်သူက ဆီဟငယ်ငယ်တုန်းက မှောင်ခိုသမားတွေ
လာဖမ်းသွားအတွက် မိခင်မဲ့ သားလေးကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်
တောရိုင်းမှောင်ခိုသမားတွေ ဆီဟ လေးကိုဖမ်းသွားပါတော့တယ်
သားကိုဖမ်းသွားတဲ့ကားနောက်ကို လိုက်ခဲ့ပေမယ့် မမှီခဲ့ပါဘူး
ဒီလိုနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေကို တရားမဝင်မှောင်ခိုလုပ်နေတဲ့
အဖွဲ့ကိုလိုက်လံဖော်ထုတ်နေတဲ့ အေးဂျင့်ဟွန်တို မထင်မှတ်ဘဲတွေ့ဆုံမိပြီး
သူ့သား ဆီဟ ဘယ်လိုကယ်ဆယ်မလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦး
မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ အချစ်ဆိုတာ ပေါ်လာတတ်တယ်လ�